Ihe na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ China Manufacturer
Nkọwa:Defogger maka moto,Ịgba chaa chaa na-ekpo ọkụ,Helmet Visor Defogger
Home > Ngwaahịa > Ụlọ Ụlọ Ọrụ Ngwá Ọrụ > Ihe Mgbochi Na-ekpocha Ala > Ihe na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ
Ihe Nlereanya.: XHC-F009B
Ihe omimi nke kpo oku na-emetụta ihe niile gbasara ndụ anyị kwa ụbọchị. Dị ka mirror defog usoro, nlekọta ahụike maka boby, ihe ọkụkụ na-ekpo ọkụ ọkụ ọkụ, ihe ọkụkụ na-ere ọkụ, ihe ọkụkụ na-emepụta ihe ọkụkụ, mgbidi na-ekpo ọkụ, ọkụ eletrik, teepu tileti kpo oku, wdg.
Ya mere, olee ihe nkiri uhie kpụ ọkụ n'ọnụ?
Igwe ọkụ kpụ ọkụ n'ọnụ, nke a maara dị ka ihe nkiri kpochapu ọkụ, bụ nkà na ụzụ na-ekpo ọkụ nke ọkụkụ na ụlọ ọrụ ọkụ ọkụ. Ọ na-ebupụta ebe dị elu, na-eme ka ikuku na-ekpo ọkụ site na iji radiation infrared. Ọ na-adịgide adịgide ma na-eji ike karịa ike karịa usoro ikpo ọkụ omenala .
Igwe ọkụ kpụ ọkụ n'ọnụ na-emetụta ọtụtụ akụkụ dị ka mirror ime ụlọ, mirror rear rear mirror, drawer freezer, retroreflector wdg. Ndị injinia anyị nwere ike ịmepụta ihe ọkụkụ nke dabara na ihe ị chọrọ. Anyị nwere ọtụtụ nsụgharị ọkọlọtọ ndị dị njikere iji rụọ ọrụ ọrụ OEM.
4. Site na PVC abụọ isi , 2 x 0.75 mm square, ogologo n'èzí 700 mm + 10 -0
6. Site na akwa abụọ nke 0.125 PET Igwe ihe eji eme ihe, ụdị ntụgharị ihu abụọ nwere ike ịkwado akwụkwọ dị mkpa ka ewepụsị ya
Defogger maka moto Ịgba chaa chaa na-ekpo ọkụ Helmet Visor Defogger Defogger Mirror Mirror Defogger na-enweghị atụ Doro Defogger Mirror Defogger nke a na-ahazi ahazi System Defogger Mirror